Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana Virtualbox | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana sy fametrahana ny Virtualbox
Virtualbox dia masinina virtoaly GPL na programa ampiasaina amin'ny "virtualize" (fametrahana rafitra fiasa iray ao anatin'ny iray hafa) rafitra miasa. Raha ny fahitako azy, ity programa ity dia intuitive kokoa noho VMware, ary miasa toy ny hatsarana izy io, ankoatry ny fitantanana tsara ny loharanon-karena ao amin'ny masininay.
1 Inona no atao hoe Virtualbox
2 Ahoana ny fametrahana Virtualbox amin'ny Ubuntu
3 Ahoana ny famoronana milina virtoaly
4 Ahoana ny fananganana milina virtoaly vaovao anao
5 Ahoana ny fampandehanana ny milina virtoaly
Inona no atao hoe Virtualbox
Oracle VM VirtualBox dia rindrambaiko virtualization ho an'ny maritrano x86, noforonin'ny orinasa alemà innotek GmbH. Izy io dia novolavolain'ny Oracle Corporation ho anisan'ny fianakavian'ireo vokatra virtoaly. Amin'ny alàlan'ity rindranasa ity dia azo atao ny mametraka rafitra fiasa fanampiny, fantatra amin'ny hoe "rafitra vahiny", ao anatin'ny rafitra fiasa "mpampiantrano" iray hafa, izay samy manana ny tontolo virtoaly misy azy avy. Izany hoe, noho ny Virtualbox, afaka mamorona "masinina virtoaly" ao anatin'ny Ubuntu izahay ary mametraka sy mampandeha ny Windows toa ny fampiharana hafa fotsiny. Afaka manao toy izany koa isika amin'ny fivadihana, miaraka amin'ny Windows ho rafitra "mpampiantrano" ary i Ubuntu "vahiny".
Anisan'ireo rafitra miasa (amin'ny maody fampiantranoana) ny GNU / Linux, Mac OS X, OS / 2 Warp, Microsoft Windows, ary Solaris / OpenSolaris, ary ao anatin'izy ireo dia azo atao tsara ny manao virtoaly ny FreeBSD, GNU / Linux, OpenBSD. , OS / 2 Warp, Windows, Solaris, MS-DOS, ary maro hafa.
Tany am-boalohany dia natolotra tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana momba ny rindrambaiko tompona ny fampiharana, saingy tamin'ny Janoary 2007, taorian'ny taona maro nivoatra, VirtualBox OSE (Open Source Edition) dia niseho teo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL 2.
Ahoana ny fametrahana Virtualbox amin'ny Ubuntu
Misy interface interface maro ho an'ny Virtualbox, hanoro hevitra aho ny hametraka ilay ho an'ny Qt, izay raha ny fahitako azy no feno sy mora ampiasaina indrindra.
Manokatra terminal izahay ary manoratra:
sudo apt-mahazo mametraka virtualbox-qt
Raha vantany vao tafapetraka dia ho hitanao eo ambanin'ny Accessories> Virtualbox.
Ahoana ny famoronana milina virtoaly
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mamorona ny milina virtoaly izay hametrahantsika ny rafitra fiasa "vahiny" avy eo. Amin'ny teny azo ampiharina, ity masinina virtoaly ity dia tsy rakitra hafa fa tsy maintsy hampiantrano antsika any ho any. Ity rakitra ity dia ahitana ny fampahalalana sy ny toerana ilaina rehetra hahafahana mametraka ny rafitra "vahiny".
Mba hamoronana ilay milina virtoaly vaovao, raha vantany vao misokatra ny programa, dia tsindrio ny bokotra vaovao. Miseho ny mpamosavy virtoaly famoronana. Ny teboka tsirairay manaraka dia ny efijen'ity mpamosavy ity:
1. Miarahaba antsika ny efijery voalohany. Manome ny bokotra izahay manaraka.
2. Ny efijery faharoa dia manontany anay ny anarana sy ny karazana rafitra fiasa tianay hapetraka. Amin'ny tranga misy antsika dia afaka misafidy isika Microsoft Windows y Windows XP. Amin'ny anarana soratantsika Windows.
3. Ny efijery fahatelo dia manontany anay ny haben'ny fahatsiarovana ifotony. Amin'ny ankapobeny, ny safidy default dia ampy. Na izany aza, raha manana fahatsiarovana be na kely ianao dia azonao atao ny manova io toerana io. Izaho, ohatra, dia manana fahatsiarovana 2GB ary saika napetrako hatrany amin'ny 512MB ity safidy ity.
4. Ny efijery fahefatra dia manontany anay amin'ny masinina virtoaly hametrahana ny OS vahiny. Amin'ny fotoana voalohany tsy maintsy ilazantsika azy fa te hametraka ny OS amin'ny milina vaovao izahay. Saingy, amin'ny fotoana mety ho avy izay tianao hamolavolana an'io milina virtoaly io ary hametraka ny zava-drehetra tsy ho eo am-boalohany, azonao atao ny misafidy izany amin'ny lisitra. Araka ny nolazaiko dia tokony hifidy isika izao Mamorona kapila virtoaly vaovao.
5. Miseho ilay mpamosavy kapila virtoaly vaovao. Ao amin'ny efijery voalohany dia mila misafidy ny karazana tahiry isika. Amin'ny ankapobeny dia tsara ny misafidy Fitehirizana fanitarana mavitrika. Midika izany fa raha toa ka hanana 3 GB ny kapilao dia tsy hipetraka foana io habaka io fa hipetraka kosa ny izany habaka habaka izany.
6. Ny efijery manaraka dia manontany antsika ny haben'ny disk mba hamoronana. Miankina amin'ny zavatra ilainao io safidy io. 5-10GB dia mihoatra ny ampy hametrahana Windows sy fampiharana mavesatra vitsivitsy. Amin'ny safidy toerana afaka misafidy ianao hoe aiza no hitahiry ny rakitra amin'ny kapila virtoaly anao. Tena mety izany satria efa imbetsaka ny habaka natokanao ho an'ny fizarazaran'ny Linux dia tsy ampy hitoerana koa ny milina virtoaly anananao.
Ahoana ny fananganana milina virtoaly vaovao anao
Raha te hikiry ny milina virtoaly vao noforonina dia mila misafidy azy fotsiny ianao ary tsindrio ny bokotra fanahafana. Hisokatra ny varavarankely izay ahafahantsika manova ny lafiny rehetra amin'ny fikirakirana ny milina virtoaly. Ny tsirairay amin'izy ireo dia tena manazava ny tenany, noho izany dia hifantoka amin'ny vitsivitsy izay tsy dia mora fantarina izay ataony na ny fomba fandaminana azy aho.
Avy eto dia azonao atao ny mifehy ny fikirakira kapila an'ny milina virtoaly anao. Amin'ny ankapobeny, misy 3: ny kapila virtoaly, ny cd-rom anao ary ny kapila misy anao. Eto ny singa izay ovaina matetika dia ny cd-rom. Manomboka eto dia miteny amin'ny milina virtoaly isika mba "hametraka" ny sary ISO an'ny Windows ao am-piandohana. Amin'izany fomba izany dia afaka mametraka Windows ao amin'ny milina virtoaly tsy misy olana isika.
Avy eo, tsindrio ny kisary CD ao anatin'ny hazo fitehirizana. Vantany vao voafidy ny cd-rom dia tsindrio ny bokotra eo akaikin'ny safidy Fitaovana CD / DVD.
Hisokatra ny varavarankely izay ahafahantsika manampy ny sary ISO an'ny OS samihafa tadiavinay hosedraina. Hanampiana iray, andao hametraka.
Farany, mifantina ny sary ISO izahay ary dia izay.
Ny zavatra nataontsika dia ny maka tahaka ny fampidirana ny Windows CD (mieritreritra isika fa misafidy sary ISO amin'ny Windows CD) amin'ny boot. Ity dia dingana iray ilaina hahafahana mametraka Windows ao amin'ny milina virtoaly misy antsika.
Ilaina koa izy io amin'ny fitsapana ireo distros Linux. Azo antoka, azonao atao ny mampidina ny ISO distro tianao hosedraina. Avy eo dia miteny amin'ny masininao virtoaly ianao mba hamaky amin'ny alàlan'ny famakiana ity ISO ity, lazao hoe, Linux Mint 9. Rehefa mihazakazaka ny masinina ianao dia ho afaka hizaha toetra ny Linux Mint toy ny hoe CD mivantana, toy ny ahafahanao mitsapa azy amin'ny milina "tena izy". Inona koa, raha tianao izany, dia azonao atao ny mametraka azy amin'ny milina virtoaly anao. Ny valiny dia izao: mbola manana ny distro Linux fanaonao ianao toy ny mahazatra, izao vao afaka mihazakazaka Linux Mint 9 ianao ary mizaha azy io toa fampiharana hafa fotsiny. Mahaliana, sa tsy izany?
Raha tadiavinao ny fahafahan'ny milina virtoaly miditra fampirimana ao amin'ilay masininao "tena izy" dia mila ampidiro fotsiny ny lalan'io fampirimana io amin'ity safidy ity.
Mba hanaovana izany dia kitiho ny bokotra izay misy folder sy + toy ny hita ao amin'ity pikantsary manaraka ity:
Ahoana ny fampandehanana ny milina virtoaly
Eny, ity no mora indrindra. Safidio ny milinao amin'ny lisitra eo amin'ny efijery Virtualbox lehibe ary tsindrio ny bokotra Start. Voila!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fametrahana sy fametrahana ny Virtualbox
73 hevitra, avelao ny anao
Saoly dia hoy izy:
Ny fomba fanaovana ny masinina virtoaly dia rehefa miditra aho dia tsy afaka miverina amin'ny Linux
Mamaly an'i Saul
Hugo Rios dia hoy izy:
Salama namana, lahatsoratra tena tsara, manana fanontaniana aho, ahoana no hametrahana vb misy windows 12.04 ao amin'ny ubuntu 7 ????
Valiny ho an'i Hugo Rios
Saito Mordraug dia hoy izy:
Toy ny mahazatra dia tsara ny hafatrao, tena tsara ny fanazavana satria tadidiko fa taloha kelin'ny nananganana VB voalohany dia nandaniako asa kely aho hanamboarana tsara ny rafitra virtoaly.
Mamaly an'i Saito Mordraug
Cesar Vasquez dia hoy izy:
NY PCAKAKO dia manana mpampiasa 3, INSTALAKA INDRAY NY BOX VIRTUAL SY NY CN XP VIRTUAL MAKINA .. FA TSY AZO ATAO MPIASA VIRTUAL INDRINDRA AMIN'NY mpampiasa hafa, Ahoana no anaovako azy? SLDS ..
Valiny tamin'i Cesar Vasquez
Raha heverina fa manana distro napetraka ao anaty kapila virtoaly VB ianao dia tsy hitako izay vitanao. Tokony hamorona kapila virtoaly vaovao lehibe kokoa ianao ary hamerina hametraka ny zava-drehetra. : S
Fabiola dia hoy izy:
tena tsara misaotra !!
Manana fanontaniana aho, raha efa manana ny VB napetraka miaraka amin'ny 10 GB ohatra aho, azoko atao ve ny mampitombo izany fahatsiarovana izany amin'ny fotoana iray? sa ilaina ny mamafa sy mametraka indray ny zava-drehetra?
Valiny tamin'i Fabiola
Ny fahaiza-mandanjalanja dia manondro fa tsy mety izany, satria ny rafitra fototra (raha ny aminay Linux) dia ho lany fahatsiarovana misy. : S Miarahaba anao! Paul.
Tsy azavaiko izany
inona no hitranga raha apetrako daholo ny fitadidiko ram?
Ilay mpijirika dia hoy izy:
nanomboka nihidy ny pc ary tokony hovonoinao an-kery amin'ny alàlan'ny fanalana azy io
Valio ilay mpijirika
Jose GDF dia hoy izy:
Marina izany. Tsy afaka nampifandray na inona na inona tamin'ny alàlan'ny USB koa aho.
Valiny tamin'i José GDF
HI. SOA TSARA TSARA NY POST ANAO IZAO MANANA FANONTANIANA, AHOANA NO HATAONAO HAMOKANA NY HERIN'NY FAHAMARINANA TAMIN'NY MOSINA VIRTUAL REHEFA HITANAO FA NY SISTEMANA ATAONAO FA INSTALLO INDRINDRA?
Valiny amin'i VICTOR
Victor, rehefa manampy milina virtoaly vaovao ianao dia hanontany anao izy, ankoatry ny zavatra hafa, hoe ohatrinona ny tadidy tianao hatokana ho azy. Ny mahazatra dia isa matetika. eo anelanelan'ny 256 sy 512 MB.
Tsy afaka nampiasa ny USB koa aho
ary avy amin'ny varavarankely virtoaly dia tsy afaka manova na manampy rakitra aho amin'ny fampirimana nozaraina
manamarika ahy toy ny hoe tao anaty maody novakiana fotsiny ilay fampirimana
Afaka nizara ny usb aho
Raha te-hanao an'izany ianao dia mila mampiditra ny kaontinao amin'ny vondrona mpampiasa virtualbox:
Rafitra–> Fitantanana–> Mpampiasa sy vondrona
safidio ny mpampiasa anao ary kitiho ny vondrona fitantanana
mitady ny vondrona vboxusers izahay
tsindrio avo roa heny ianao, mariho ny anaranao izay tsy nasiana mari-toerana amin'ny alàlan'ny default ary kitiho ny hanaiky ary dia izay
afaka mizara ny usb sahady isika
Raha mangataka ny tenimiafin'ny mpampiasa anao hanao fanovana izy dia miditra fotsiny izahay
Tsy mila manomboka virtualbox fotsiny ianao vao afaka mizara ny usb
Tsara! Misaotra amin'ny tendrony! 🙂
Colozo66 dia hoy izy:
Salama, mampiasa ubuntu 11.10 amin'ny virtualbox aho fa miadana be ny mamaky ireo pejy dia mihamangatsiaka koa ireo horonantsary raha misy afaka milaza amiko ny antony ?? aloha, Misaotra ..
Valiny amin'i Colozo66
Fredinxon dia hoy izy:
Manana ubuntu 10.10 aho ary tsy mivoaka na aiza na aiza ao amin'ity Vboxusers Group ity dia tsy vitako izany, hanokatra ny anarana novaina izy ireo ary hanana iray hafa
Valiny tamin'i Fredinxon
Edison dia hoy izy:
Azo atao ny mijery ny USB amin'ny alàlan'ity kinova ity raha ity no azoko anaovana azy misaotra
Mamaly an'i Edison
Tsy olan'ny "fanavaozana" fa an'ny kinova. Ny kinova OSE an'ny Virtualbox dia tsy mahita fitaovana USB mifandray. 🙁 "vahaolana" dia mety ho ireto: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/06/como-montar-dispositivos-usb-usando.html
Raha ny marina, raha afaka mizara mivantana ny usb ianao araka ny nolazaiko tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha ary eto dia averiko indray:
Mandehana any amin'ireo mpampiasa ny rafitra linux anao ianao
Apa! Tsy tadidiko izany ... mahaliana!
Misaotra nizara azy… indray! 😛
Tsy misy ... 🙂
gringuex dia hoy izy:
Salama, tsara be ny lahatsoratra, ary tsara be ny bilaogy. Ity ny fangatahana:
Te hampiasa milina virtoaly hanandramana serivisy (apache, squid, iptable) amin'ny mpampiantrano. Raha avelako ao amin'ny maody Nat, ny virtualized dia mandray IP 10.0.2.x ary mivezivezy tsy misy olana .. fa amin'ny mpampiantrano dia tsy manana interface ao amin'io tambajotra IP io aho .. Fantatrao ve ny fomba tokony hamboariko ho afaka hanao an'io? Misaotra mialoha, arahaba.
Valiny amin'ny gringuex
Salama! Ny marina dia tsy azoko tsara izay tianao hatao. Tsy azonao atao ve ny mitsapa serivisy mivantana amin'ny masininao nefa tsy mametraka milina virtoaly? 😛 Miala tsiny fa tsy afaka nanampy anao bebe kokoa ...
Mamihina sy misaotra anao nanoratra! Paul.
Braulio Jared Cano Angulo dia hoy izy:
Izy io dia miasa ho ahy, mampiasa 4.1.12 alaina ao amin'ny tranokala ofisialy aho ary miaraka amin'ny takiana faran'izay kely indrindra dia mety amiko izany, heveriko fa tsy maintsy ho ny fahaizan'ny fitaovana entin'ny solosainao
Valiny tamin'i Braulio Jared Cano Angulo
Israel Perez dia hoy izy:
tena tsara fa niasa lavorary
Valiny tamin'i Israel Perez
Tsara! Faly aho.
Famihinana lehibe ary misaotra anao nanome hevitra!
GonzaloMontesDeOca dia hoy izy:
Saingy ny kinova OSE dia tsy mamela hampifandray fitaovana USB… tsy toy ny kinovan'ny PUEL
Namaly i GonzaloMontesDeOca
Nestor Jimenez dia hoy izy:
Salama, rehefa nanao ny dingana voalohany aho dia nahazo an'ity lesoka ity, tsy misy modely mety amin'ny fitadiavana kernel hita, ahoana no ahitako azy satria niteraka olana izany?
Valiny tamin'i Nestor Jimenez
Luis Matias Arriagada Galvez dia hoy izy:
Fantatrao ve ny fomba ahafahako mamorona DVD amin'ilay mpamaky kapila?
Valiny ho an'i Luis Matias Arriagada Galvez
Avelako ho anao ireo rohy mety hahaliana anao ireo: http://usemoslinux.blogspot.com/2010/06/como-montar-dispositivos-usb-usando.html https://blog.desdelinux.net/como-compartir-carpetas-entre-windows-y-ubuntu-en-virtualbox-ose/ https://blog.desdelinux.net/como-instalar-y-configurar-virtualbox/ Mihobia! Paul.
Fantatrao ve ny fomba hampiasana ny port USB? Io irery no olako!
Toa izany ... 🙁
Mieritreritra aho fa hanampy azy ireo amin'ny kinova ho avy ireo, sa tsy izany?
Na izany na tsy izany dia tsy zavatra ampiasaiko loatra izany. Farany, afaka mampiasa ny iray amin'ireo lahatahiry zaraina ianao. Etsy ankilany, ilaina ny mahita raha toa ka azo asiana lahatahiry USB ny kapila USB.
Efa nanandrana ve ianao? Raha manao izany ianao dia tiako ho fantatra ny valiny.
Famihinana ary misaotra betsaka anao naneho hevitra! Tena marina ny fandinihanao!
Arlex2014 dia hoy izy:
Fanontaniana iray, fantatrao ve ny fomba ahafahako manao virtualbox hitadidy ny tadiko USB? dia ny te-handefa programa amin'ny usb aho ary tsy hahafantatra ahy izany
Valiny amin'ny Arlex2014
Salama, fantatrao? Nisy lesoka nitranga tamiko, rehefa mihazakazaka ny masiniko aho dia mahazo «FATAL: Tsy misy mpanelanelana azo entina bootable hita! Niato ny rafitra »Tsy haiko ny antony, raha afaka manampy ahy ianao dia ho feno fankasitrahana loatra aho
Omeo izahay dia hoy izy:
Mila manampy disk .iso amin'ny voalohany ianao satria amin'ny alalàn'ny default anao dia voalamina ka ny singa lehibe indrindra dia ny dvd
Valiny tamin'i Denos
Midika izany fa tsy hitan'ny BIOS ny rafitra fiasa handefasana ...
Mety ho ny nanovanao ny BIOS hanombohana ny toerana hafa (ny cd, ny usb, sns.)?
Izy io koa dia mety vokatry ny fianjeran'ny kapila mafy na ny fametrahana GRUB tsy tsara.
Manantena aho fa nanampy ahy ...
ps: raha ny fanazavana, sary ratsy inona no azoko avy any Mexico androany. Ny masoivoho meksikana any arzantina dia tsy manaja sy tsy mahay mankasitraka.
fandraisana anjara tena tsara fisaorana nanampy ahy lotooo tena tiako izy io nilaiko ilay milina ary tsy te-hamongotra Linux aho noho ny fart windows ka raha afaka milalao
Salama afaka milalao amin'ny linux uu ihany ianao, mila manisy sosona mifanentana (divay) fotsiny ianao ary manangona ny mpamindra sary Open GL anao :), ary misy fomba hafa koa arahaba
Avern0s dia hoy izy:
Fanazavana tsara, notsapaiko tamin'ny Ubuntu 101.10 ho mpampiantrano ary XP ho vahininy ary Ok. Raha ny tokony ho izy dia nijery zavatra tany ivelany aho hametrahana vahiny vahiny OS OS 10.6.7 miaraka amin'ny Virtual BOx OSe ary miaraka amin'i VM Ware fa tsy afaka.
Efa nanao fitsapana momba an'io ve ianao? Nahavita nampidina ny MAC OS tao amin'ny ISO aho (efa sarotra ny mahita) ary nametraka azy io fa rehefa manomboka tsy manomboka dia manome hadisoana kernel amiko.
Valiny amin'ny Avern0s
Fizarana 17 an'ny MOSXSL-4GB
X11 Extra Pack
Sambany aho no nahita 😛
raha hametraka azy dia tsy maintsy manao korontana satria tsy maintsy apetrakao ny X11 mba hanaovana virtoaly, maro ny tuto ao amin'ilay tambajotra soa aman-tsara.
Ny marina dia tsy nanandrana azy aho. 🙁
Ampahafantaro ahy raha mahomby ianao ary fantaro ny fomba fanaovana azy! 🙂
Aristides dia hoy izy:
Salama namana, tiako ny tutorial anao .. misaotra anao nanao an'io .. Manana fisalasalana aho, mety manana tutorial ianao ny fametrahana viartualbox ho an'ny kali linux, azafady, misaotra betsaka .. Nampiasaiko ny tutorial-nao mba hametrahana azy mieritreritra fa mety ho azo ampifanarahina .. fa io lesoka io no manipy ahy.
http://imageshack.us/f/42/be70.png/ Eny, arahaba, ary misaotra tamin'ny valinteninao sy ny fotoanao.
Valiny ho an'i Aristides
yerzon dia hoy izy:
amin'ny linux mint 15 tsy mandeha izy .. sudo apt-mahazo mametraka virtualbox-ose-qt
Valio i yerzon
Ity fampianarana ity dia ho an'ny ubuntu, Linux mint dia manana tsipika komandy hafa, linux izy ireo fa tsy mitovy, arahaba 😛
Tokony hisy izany satria tsy misy fonosana ho an'ny kinova Ubuntu izay iorenan'ny Mint 15.
(*) Miala tsiny, fa tsy azo atao amin'ny alàlan'ny baiko fotsiny, satria ao amin'ny tranokala fampidinana oracle dia hahita ireo fonosana fampidinana amina sehatra unix maromaro ianao.
Ubuntu 13.04 ("Raring Ringtail") i386 | AMD64
Ubuntu 11.10 ("Oneiric Ocelot") i386 | AMD64
Ubuntu 11.04 ("Natty Narwhal") i386 | AMD64
Debian 6.0 ("Manery") i386 | AMD64
Fedora 18 ("Spherical Cow") / 19 ("Schrödingers Cat") i386 | AMD64
Fedora 16 ("Verne") i386 | AMD64
Mandriva 2010.0 / 2010.1 i386 | AMD64
Oracle Linux 4 ("OL4") / Red Hat Enterprise Linux 4 ("RHEL4") / CentOS 4 i386
Ny fizarana rehetra i386 | AMD64
ary raha mila manampy ireo tahiry ao amin'ny debian / ubuntu ianao
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian tsy fahita firy
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian contrib be loatra
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian farito ny contrib
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian contrir oneiric
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick contrib tsy andoavam-bola
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian confid tsy misy vidiny maimaim-poana
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian karmic contrib tsy andoavam-bola
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian mafy contrib tsy maimaim-poana
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian contre wheezy
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian mametaka contrib tsy andoavam-bola
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lenny contrib tsy andoavam-bola
ao amin'ny /etc/apt/source.list 🙂
* miala tsiny amin'izay misy fanelingelenana mety hanompo azy ireo
Raha te-hametraka usb2.0 ianao dia mila mametraka Oracle VM VirtualBox Extension Pack mba hiasa, ary mila manampy ny tambajotra ao amin'ny virtualbox 🙂 izay atao amin'ny config / motherboard / boot order ary ny mariky ny tamba-jotra koa ianao. mandeha ianao config / network / adapter n1 ary manamarina ianao raha voamarika ahafahan'ny adaptatera tambajotra ary mifandray amin'ny NAT izy io, avy eo ianao dia manamarina fa tsara ny data data advanced options (azonao atao ny mampifandray tambajotra amin'ny LAN (tariby marika mifandraika) ka ianao hanana Internet ao amin'ny virtualbox anao
pepi dia hoy izy:
(͡ ° ͜ʖ ͡ °) jijijijiji
Mamaly an'i pepi
menio, jereo fa manana olana aho, apetraho ny virtualbox miaraka amin'ny ubuntu 12.04 miaraka amin'ny vahiny sy ny windows 7 ho mpampiantrano, ao amin'ny ubuntu configure ny mpizara mysql izao te-hifandray amin'ny windows ka hatramin'ny ubuntu aho ary tsy avelany ho ahy, fantatrao ve hoe inona ny tamba-jotra fanahafana tokony hataoko?
Ana Chavez dia hoy izy:
Raha izany dia amin'ny ahy rehefa any amin'ny terminal no apetrako: sudo apt-get install virtualbox-ose-qt ary omeko izy dia mangataka ny tenimiafiko ary aorian'ny nametrahako ny teny miafiko ary omeko miditra dia miteny amiko izy:
Ny famakiana ny mombamomba ny satan ... Vita
E: Tsy hita ilay fonosana virtualbox-ose-qt
ary tao aho nijanona ary tsy hitako izay hatao, miandrasa valiny. ary tiako ho fantatra ihany koa ny fomba ahafahanao manampy ahy hamaha olana hafa toa ny tsy ahafahako misintona programa amin'ny Internet ary tsy afaka mijery horonantsary aho
Valiny tamin'i Ana Chavez
Vonona! Efa nahitsiko izany. Antsoina hoe virtualbox-qt izao ilay fonosana.
Lahatsoratra tsara dia tsara, ho an'ireo izay te-hiditra lalindalina kokoa, ity misy fampianarana iray hamoronana milina virtoaly maro ary handrindrana tambajotra an-trano, feno tokoa ity, tsikelikely:
Salama, tsara ny andro misy varavarankely misy kozatra 8 aho ary nandany fotoana ny fametrahana boaty virtoaly ary namela ahy ho milina virtoaly tsy misy olana izy io nefa rava ny kapila mafy nataoko ary tsy maintsy novaiko ankehitriny rehefa manomboka ny milina virtoaly fa raha Mampifandray fitaovana USB aho, mahazo efijery manga misy tarehy kely aho ary manomboka indray. Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao.
Eto ianao dia manana mpitari-dalana raha sendra ny mifanohitra aminao no tadiavinao, tianao ny manamboatra VirtualBox ao anaty tontolo Windows mba hamoronana virtoaly fizarana Linux. http://cursohacker.es/instalar-windows-en-virtualbox
Patricio Cancino A. dia hoy izy:
tutorial tsara, marina ary ilaina
Valiny tamin'i Patricio Cancino A.
Imbetsaka aho no nanana olana "Fantatro fotsiny fa tsy mahalala na inona na inona aho" fa amin'ny Ubuntu dia tsara vintana ianao mahita fanampiana toa ilay eto amin'ity pejy ity, izay manome anao ny fotoana hialana amin'ny "Tsy fantatro na inona na inona "ny fahalalana hoe mendrika inona ity vondrom-piarahamonina ity. Graceaaasssss
Salama namana, ampio aho amin'ny zavatra iray. Jereo, vaovao aho momba an'ity Kali ity. Tiako ianao hiteny amiko izay manjo ahy any Kali.
Aza afaka mametraka fonosana vitsivitsy. Mety hidika izany fa
nangataka tranga tsy azo tanterahina ianao na, raha mampiasa ny fizarana
milamina, fa misy fonosana ilaina tsy mbola noforonina na manana
nesorina tsy hiditra.
Ity fampahalalana manaraka ity dia afaka manampy amin'ny famahana ny toe-javatra:
Ireto fonosana manaraka ireto dia misy fiankinan-doha tsy voavaha:
virtualbox-qt: Miankina: virtualbox (= 4.1.18-dfsg-2 + deb7u3) fa tsy hametraka izany
E: ny olana tsy azo ahitsy, notazoninao ireo fonosana tapaka.
Augusto J. Echevarria Martinez dia hoy izy:
Nametraka ny milina virtoaly "VirtualBox" aho, saingy tsy mandeha amiko izany fa hafatra diso fotsiny no azoko avy amin'ireo tranonkala rehetra.
Valiny tamin'i Augusto J. Echevarria Martinez
Ahoana no hametrahako ny Ubuntu 14.10 amin'ny masiniko virtoaly raha manome ahy io hadisoana io aho? kernel driver tsy nametraka '/etc/init.d/vboxdrv setup'
Mila manao fitsapana maika aho, misaotra amin'ny fanohananao.
Ny vahaolana: http://askubuntu.com/questions/205154/virtualbox-etc-init-d-vboxdrv-setup-issue
Misaotra tutorial tsara dia tsara
guli dia hoy izy:
Misaotra tompoko, angon-drakitra tsara
Mamaly an'i guli
Ahoana no hataoko rehefa mirehitra windows aho, manomboka ny milina virtoaly nefa tsy mila manomboka azy aho, lasa mandeha ho azy rehefa manomboka ny solosaina
Gianluca dia hoy izy:
Afaka nametraka ny windows aho ... ny fanontaniako dia izao:
Te hanana rafitra fiasa roa hapetraka amin'ny solosaina aho fa tsy virtoaly ao anatin'ny iray hafa. Io dia mety ho? Ahoana no anaovako azy?
Misaotra betsaka, tsara ny tutorial.
Valiny tamin'i Gianluca
Azo antoka, izany dia antsoina hoe fametrahana amin'ny "boot roa". Amin'izay, rehefa manomboka ny masinina ianao, dia hiseho ny menio hifidiananao ny rafitra fiasa hanombohana (Linux na Windows).
Ny tolo-kevitro dia ny hijeranao amin'ny YouTube ny horonan-tsary roa hanombohana miaraka amin'ny distro Linux sy Windows tianao. Io no fomba tsotra sy mora indrindra.
Flavio gallegos dia hoy izy:
Mahaliana, fandraisana anjara tsara, mazava ho azy!
Valiny tamin'i Flavio Gallegos
Henry Ibarra Pino dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara. Misaotra indrindra anao.
Valiny tamin'i Henry Ibarra Pino
Salama, mahazo lesoka aho rehefa manomboka ny masinina. Inona no azoko atao hahazoana ity »FATAL: tsy misy mpanelanelana azo entina bootable hita! nijanona ny rafitra. " inona no azoko atao, ampio azafady
Antonio Aguilar dia hoy izy:
aorian'ny fanomezana ny torolàlana dia tsy misy fidirana passwd ho an'ny mpampiasa apt get, rehefa mamaha azy aho, amin'ny alàlan'ny fa, manomboka amin'ny linux aho. misaotra
Mamaly an'i antonio aguilar
Inona no tolo-kevitr'ireo rafitra milina virtoaly apetraka amin'ny linux hiasa amin'ny windows 7
Granola: fitaovana fitsitsiana angovo
Ampiharo amin'ny WINE ny volavolan-doko amin'ny lohahevitra GTK